i Madagasikara no firenena aty Afrika manana karazana Bambou betsaka indrindra - Madagascar Informations
20 octobre 2016 20 octobre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Isika no firenena aty Afrika manana karazana Bambou betsaka indrindra.
Karazan-javaboary mahavita zavatra maro ny volobe ankoatra ny fahafahana manamboatra fanaka aminy dia miaro ny tontolo iainana ihany koa izy satria miaro ny tany tsy ho kaon’ny riaka ary azo ambolena eny amin’ny tehezam-bohitra ary afaka mandrakotra tany sy tanety ngazana farany izay haingana.
Karazan-kazo anisany goavana ny bararata ka antony mahatonga azy ho isany « espèce forestière. » ka tafiditra ao amin’ny lalana velona ny fanajariana ny ala.
Noho izany ny ministerany tontolo iainana , ny hai-javaboary ary ny ala no lohany amin’ny fanajariana azy eto Madagasikara. Tsy ireo ihany no soa azo avy amin’ny Bambou fa ahavitana zavatra maro mitovy amin’ny hazo izay mihoatra lavitra ny fahatezany sy ny fahamafisany , fanaovana trano tsy ho simbany cyclone ihany koa any amin’ny tany Asiatique.
Farany anisany tsara ampiasaina ho arina fandrehitra ny bararata mba hampihenana ny fampiasana hazo efa miha ringana.
Manatanteraka atrik’asa mandritra ny 2 andro mikasika ny politika nasionaly ny fampiroboroboana ny seham-pihariana volobe na ny bararata ny fandaharan’asa PROSPERER sy ny tetik’asa INBAR na ny Réseau international pour le Bambou et le rotin izay manana ny foibeny any Beijing any Chine.
Marihina fa efa niandohavana atrik’asa tany amin’ny faritra miisa 9 izao atrik’asa tanterahina izao ka isan’izany ny faritry Sofia, Boeny ,Bongolava ,Itasy ,Vatovavy Fitovinany ,Atsinanana, Analamanga ary Analanjirofo .
Anisany nakana ny hevitrin’ny mpiara-miombon’antoka ihany koa ireo atrik’asa natao tany amin’ny faritra.
Fanoitra ho ahafahana miady amin’ny faharatsiany toetr’andro ihany koa
Tanjona amin’izao atrik’asa izao ny ahafahana mampandroso ny fikirakirana ny hazo ho azo ampiasaina amin’ny fiainana andavan’andro.
← Promouvoir la transformation des produits locaux avec le savoir-faire des femmes et pour le développement des échanges inter-régionaux.
PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE ET DE MÉDECINE 2016 →
Madasun : hanatsara ny fari-pianany vahoaka eny amin’ny tontolo ambanivohitra
7 juillet 2017 Gasikara 0
Manohana akaiky ny tanora ny ONG Madasun sy ny Cnaps
26 décembre 2016 Madagascar Informations 0